Suavecito - Firme Clay Pomade | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Suavecito - Firme CLAY Pomade
Suavecito - Firme CLAY Pomade
Single - MMK 38,000 MMK3Pack - MMK 112,000 MMK
--Strong Hold | Natural Matte Finish | Clay Pomade--
ဆံပင်ကို ထူထူထဲထဲဖြစ်စေပြီး၊ အကောင်းဆုံး Strong Hold ထိန်းအား၊ ဆံပင်အရောင်တောက်ပစေခြင်းမရှိတဲ့ သဘာဝဆန်ဆန် Natural Matte Finish နှင့် ခြောက်ကပ်ခြင်းများမရှိပဲ ချောချောမွေ့မွေ့ ပုံသွင်းစေနိုင်မည့်...
Suavecito - Firme Clay Pomade သည် ကမ္ဘာကျော် လူကြိုက်အများဆုံး အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Suavecito - USA မှ ထုတ်လုပ်ထားသော အကောင်းဆုံးထိန်းအား Strong Hold၊ ဆံပင်အရောင်တောက်ပစေခြင်းမရှိတဲ့ Natural Matte Finish ကိုပေးစွမ်းပြီး ဆံပင်အမျိုးအစားအားလုံးနှင့်သင့်တော်စေမဲ့ ချောချောမွေ့မွေ့၊ စေးစေးပိုင်ပိုင် ပုံသွင်းနိုင်အားပါရှိပါသည်။ ဆံပင်ကို တောင့်ခဲသွားစေခြင်းလည်းမရှိပဲ အချိန်မရွေးဆံပင်ပုံစံပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Strong Hold နှင့် တစ်နေ့တာဆံပင်ပုံစံကို တာရှည်ခံပုံကျနေစေရုံသာမက၊ ဆံပင်ထူသူများအတွက် ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူဆံပင်ပုံသွင်းနိုင်စေပြီး၊ ဆံပင်ပါးသူတွေအတွက်လည်း ထူထူထဲထဲဆံပင်ပုံစံများကိုပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဆံပင်အမျိုးအစားမရွေးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင် Texture အရေးအကြောင်းများနှင့် Volume ကောင်းကောင်းပေးပြီး၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် အဖွဆံပင်ပုံစံများအားလုံးနှင့်သင့်တော်သော ဆံပင်ကိုထူထူထဲထဲရှိစေမည့် Clay Pomade အမျိုးအစားခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး Strong Hold ထိန်းအား
သဘာဝဆန်ဆန် ဆံပင်အရောင်တောက်စေခြင်းမရှိ (Natural Matte Finish)
Volume နှင့် Texture ပိုပေးနိုင်ခြင်း
ခေါင်းပြန်လျှော်ရလွယ်ကူ (Build Up အနည်းငယ်ပါရှိ)
Suavecito ၏ လူကြိုက်များသော မူလ Original ရနံ့
Review အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်
An American product, Suavecito's Firme Clay Pomade provides your hair withanatural, matte finish andastrong hold that will last throughout the day. It's suitable for most hair types and hair lengths where it will add texture and volume without drying stiff or shiny.
This Clay Pomade will give youasmooth application withamonster grip when it settles. Use small amount for casual messier looks and use more for styles that needs tighter grip. Applying to drier hair will add more hold and an even more matte finish.
Responsibilities of the product:
No Crunchy Hair
Restylable Anytime, Anywhere
Easy washout with little Build Up
Famous Suavecito Original Scent
Myanmar's Finest Men's Grooming Webstore